တနေကုန် လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မယ့် Scentbird ရဲ့ New Body washes! | CosmeticMyanmar
Home » Article » တနေကုန် လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မယ့် Scentbird ရဲ့ New Body washes!
တနေကုန် လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မယ့် Scentbird ရဲ့ New Body washes!
လူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ လူတယောက်ရဲ့အသွင်အပြင်သာမက တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကပါ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ကဏ္ဍကနေပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် Product တွေဝယ်သုံးတဲ့အခါ ရနံ့မွှေးတဲ့ Product မျိုးကိုပဲရွေးဝယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ အသားအရေအတွက်အထောက်အကူပြုသလို ကြေးညှော်တွေလည်းသန့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Product မျိုးကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် ရေချိုးဆပ်ပြာအသစ်လေးကို Scentbird ကနေချပြလိုက်ပါပြီ။ ဒီ Body wash ကို Pineapple & White Amber Silky Conditioning Wash နဲ့ Yuzu & Ginger Gentle Exfoliating Wash ဆိုပြီး အနံ့အားဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲခြားထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Pineapple & White Amber Silky Conditioning Wash
ဒီ Body wash ကို နာနတ်သီးအဆီအနှစ်၊ ပယင်းကျောက်အဖြူအဆီအနှစ် နဲ့ ဂျိုဂျိုးဘား အဆီစေ့လေးများနဲ့ဖော်စပ်ထားပါတယ်။ ဂျယ်လီပုံစံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဂျိုဂျိုးဘားအဆီစေ့လေးတွေဟာ အသားအရေပေါ်ရောက်တဲ့အခါ ပျော်ဝင်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ အသားအရေအတွက်အစိုဓာတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပြီး ကြေးညှော်တွေပါ သန့်ရှင်းပေးနိုင်တာကြောင့် အသုံးပြုသူတိုင်းအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Body wash လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Yuzu အဆီအနှစ်၊ ဂျင်းအမြစ်အဆီအနှစ်နဲ့ ဂျိုဂျိုးဘား တို့ကိုပေါင်းစပ်ဖေါ်ထုတ်ထားပါတယ်။ Jelly type ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ အသားအရေကိုတင်းရင်းစိုပြေစေတဲ့အပြင် ချောမွတ်တဲ့အသားအရေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုပြီး လန်းဆန်းစေမှာပါ။
နွေရာသီလည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ တနေကုန်လန်းဆန်းနေဖို့ ရေချိုးဆပ်ပြာ ကောင်းကောင်းတခုတော့ ဆောင်ထားသင့်တယ်နော်။
Image Source: www.scentbird.com
မျက်နှာ အသားအရေကောင်းမွန်အောင် နွားနို့နဲ့ ပေါင်းတင်မယ်
နူးညံ့တဲ့အမြှုပ်လေးများနဲ့ ကျန်းမာတဲ့အသားအရေကိုဖန်တီးပေးမယ့် Rise + Shine Gentle Cleanser!